Tsika yemagetsi emagetsi muSpain | Green Renewables
Tsika yemagetsi emagetsi muSpain
Tomàs Bigardà | | Simba reHygroelectric, Renewable simba
Nyika yedu ine simba guru remagetsi, rakagadzirwa panguva pamusoro pemakore 100. Nekuda kweizvi, parizvino pane hombe, inoshanda kwazvo magetsi emagetsi.
Mukati memasimba anovandudzwa akashandisa muSpain, iyo hydropower Ndihwo hunyanzvi hwakasimbiswa uye hwakakura tekinoroji, nekuda kwekushandiswa kweiyo orography uye kuvapo kwemadhamu mazhinji.
1 Simba remagetsi
2 Kuvandudza kwetekinoroji
Kune maviri typologies ekushandisa magetsi emagetsi: yekutanga, iyo miti yemvura inotora chikamu chekufamba ichiyerera nerwizi ichiitungamira kuchirimwa kuti ive turbine uye ichizotevera vanodzokera kurwizi.
Kazhinji, vanoshandisa yakaderera magetsi maseru (kazhinji asingasviki mashanu MW) uye account ye5% yemusika. Ivo vanosanganisira iyo "yepakati yekudiridza canal", iyo inoshandisa iyo kusaenzana kwemvura mumigero yekudiridza kugadzira magetsi.
Idzi tsoka tsoka zvirimwa ndezvekuti, kuburikidza nekuvakwa kwedhamhu kana kushandiswa kweiyo iripo, inogona kudzora kuyerera. Vanowanzove nematanho e simba rakakura kupfuura 5 MW uye dzinomiririra nezve 20% yemusika muSpain. Mukati meiyi mune zvirimwa zvinopomha kana kudzoserwa, zvirimwa izvo, mukuwedzera pakuburitsa simba (turbine mode), inokwanisa kukwidza mvura kudziva kana dziva nekushandisa magetsi (kupomba modhi).
Pamwechete, kuSpain kune huwandu hwenzvimbo inochengeterwa 55.000 hm3, iyo 40% yeiyo nzvimbo inoenderana Hydroelectric madziva, chimwe chezvikamu zvakakwirira kwazvo muEurope nepasi rose.
Nhoroondo, shanduko yemagetsi emagetsi muSpain yanga ichikura, mumakore achangopfuura yakaona kuderera kukuru mukupa kwayo ku kugadzirwa kwemagetsi zvakakwana, sezvo mamwe masimba anowedzerwazve akaunzwa musanganiswa yemagetsi.
Kunyangwe, ichiri kuenderera kuve chimwe chezvinhu zvinogadzirwa zvinowedzerwazve pamwe nemhepo simba. Hydropower ine inokwaniswa hunyanzvi munyika medu ye17.792 MW, izvi zvinomiririra 19,5% yeiyo yakazara, simba rinongopfuurwa ne gasi rakabatanidzwa matunhu iyo, iine 27.200 MW, ndiyo tekinoroji yekutanga nesimba rakaiswa (24,8% yeiyo yakazara), zvinopesana, simba remhepo, ine 23.002 MW yemagetsi (22,3%).
Muna 2014, mupiro wemagetsi emagetsi mukugadzirwa kwemagetsi emunyika yakamiririra 15,5%, iine huwandu hunosvika 35.860 GWh, nhamba iyi yaimiririra kukwira kwe5,6% kupfuura gore rapfuura. Zvisinei nezvakanaka hunhu hwemagetsi, yaive tekinoroji yechina mukugadzirwa, kuseri kwenyukireya (22%), mhepo (20,3% 9 uye marasha (16,5%).
Munguva pfupi iri kutevera, zvinotarisirwa kuti tekinoroji iyi icharamba ichikura paavhareji pagore iri pakati pemakumi mana kusvika makumi matanhatu emamirioni, sezvo simba remagetsi riine mukana wekuve inochengetedza hupfumi, inopfuura 1 GW.
Catalonia, Galicia neCastilla y León ndiyo nharaunda dzakazvimiririra dzine dzakakwirira yakaiswa potency mune chikamu chemagetsi, sezvo dziri nzvimbo dzine huwandu hwakanyanya hwemvura mukati meSpain
Nhanho nhanho, kusimukira kwetekinoroji kwakatungamira kune mini-hydraulic simba kuva nemakwikwi emitengo mukati memusika wemagetsi, kunyange izvi zvichisiyana zvichienderana chirimwa typology uye chiito chinofanira kuitwa. Simba remagetsi rinoonekwa se mini-hydro kana iine simba risingasviki gumi MW uye inogona kuyerera mvura kana mvura yakamira.
Parizvino, hydraulic microturbines irikugadzirwa nemasimba akaderera pane ayo 10 kW, izvi zvinonyanya kubatsira kutora mukana weinetic simba yenzizi uye kugadzira magetsi mukati nzvimbo dziri dzoga. Iyo turbine inogadzira magetsi yakanangana mukuchinjana zvazvino uye haidi mvura inodonha, yakawedzera magadzirirwo kana yakakwira yekugadzirisa mitengo.
Nhasi, kuvandudzwa kweSpanish magetsi emagetsi chikamu chakanangana nekuwana kugona kukuru, kuitira kuvandudza mashandiro ezvivakwa zvazvino. Zvirongwa zvinotungamirwa kune iyo kugadzirisa, kuvandudza, kugadzirisa kana kuwedzera kwezvirimwa zvakatoiswa kare.
Spain parizvino ine dzinosvika mazana masere emagetsi emagetsi, ane saizi yakakura kwazvo. Kune makumi maviri ezvirimwa zvinopfuura mazana maviri emamirimita, izvo pamwechete zvinomiririra 800% yesimba remagetsi emagetsi Kune kumwe kunyanyisa, kune mazana emadhamu madiki nemasimba asingasviki 20 MW, akagoverwa muSpain mose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Tsika yemagetsi emagetsi muSpain
Matambudziko nekukuvara kwekusvibiswa kwemhepo muna 2017